लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा.राजेन्द्र खनालले सिर्जना गरे कोरोना संक्रमितको गीत #Lumbenihospital • Health News Nepal
गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै डा. राजेन्द्र खनालले संक्रमितको अनुभूतिलाई आफ्नै पिडामा समिश्रण गर्दा गीत बनेर निस्केको बताए ।
बुटवल , २९ मंसिर २०७७
रात दिन बिरामीको सेवामा समर्पित चिकित्सक जव आफैँमा कोरोना संक्रमित भएपछिको अनुभवलाई समेटेर उनले उक्त गीत रचना गरेका हुन् । कोरोना संक्रमणबा बेला बिस्तारमा रहदा दिमाखमा खेल्ने शब्द, बिरामीका पिडाको अनुभूती र भोलीको भबिश्यका बारेमा आउने सोंचलाई समेटेर गीत रचेको उनले बताए ।
संक्रमणले छटपटाईरहेका कोरोना संक्रमितका पिडालाई शब्दमा उतारेर तयार पारिएको ‘मान्छे नै हुं म’ नामको गीत एल्बमको युट्यूव संस्करणको एक कार्यक्रम गरि सार्वजानिक गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका पूर्व स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रहेका डा. उमाशंकर चौधरीले आफु संक्रमित हुंदा भेन्टिलेटरमा बसेर कल्पना गरेको कुरा म्युजीक भिडियोमा समेटिएको बताए ।
Tags: #Butwal#Health and population ministry#Lumbini Resional HospitalCorona Virus #Covid19Dr.Rajendra KhanalHealth SymptomsPublic Health
Pingback: स्वास्थ्यमन्त्रीको पदबहाली गर्दै त्रिपाठीले भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्रान्तिलाई रोक्छु